Badbaadinta Coronavirus: Waqooyiga Kuuriya Dalxiis Dalxiis ayaa doonaya Booqdayaal Shiine ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Kuuriyada Woqooyi Oo Jebisay Wararka » Badbaadinta Coronavirus: Waqooyiga Kuuriya Dalxiis Dalxiis ayaa doonaya Booqdayaal Shiine ah
Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • dhaqanka • Wararka Dowladda • Investments • News • Kuuriyada Woqooyi Oo Jebisay Wararka • Dib-u-dhiska • Wararka Kuuriyada Koonfureed • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Sida laga soo xigtay Waqooyiga Kuuriya, xitaa ma jirin hal kiis oo Coronavirus ah oo ka jira dalkan go'doonsan. Sheegashadan waxaa ku muransan khubaro badan oo dibedda ah. Cudurka weyn ee ka dillaacay Waqooyiga Kuuriya wuxuu yeelan karaa cawaaqib xumo maxaa yeelay nidaamkeeda caafimaad ayaa weli jilicsan. Aafada ayaa sidoo kale dhabar jab weyn ku keentay dhaqaalaha Woqooyiga, oo ay weheliso cunaqabatayntii Qaramada Midoobay iyo masiibooyin dabiici ah xagaagan.
Dalxiiska waa mid ka mid ah lacagaha ka soo gala Waqooyiga Kuuriya. Sarkaal sare ayaa booqday goob dalxiis oo buur ah oo si wada jir ah loola maamulay Kuuriyada Koonfureed oo xifaaltan ka dhexeeyey muddadii la soo dhoweynayey, wuxuuna kala hadlay dadaallada dib loogu dhisayo "goob dhaqan oo adduunka oo dhan ka maseyrsan yahay," ayaa lagu yiri warbaahinta dowladda Axaddii.
Faafa intaan la arag, Kuuriyada Woqooyi waxay martigalisay Chinees dalxiisayaal ku sugnaa goob dalxiis oo Kuuriyada Woqooyi ah.
Waxaa dhisay Kuuriyada Koofureed, Dalxiis Waqooyiga Kuuriya loo dalxiis tago oo woqooyi ka xigta xadka u dhexeeya Kuuriya iyo boqolaal kilomitir (mayl) u jira xadka Waqooyiga uu la wadaago Shiinaha. Xiriirinta gaadiidka ee Waqooyiga Kuuriya oo aad u liita ayaa adkeyneysa in halkaas la geeyo tiro badan oo dalxiisayaal Shiine ah.
Khubarada ayaa sidoo kale shaki ka qaba inay dib u horumarin karto oo ay aagga u rogi karto goob dalxiis oo weyn iyadoo aaney iskaashi ka helin Kuuriyada Koonfureed.
Waqooyiga Kuuriya ayaa laga yaabaa inay cadaadis saareyso Kuuriyada Koofureed si ay uga faa'iideysato ka qeybgal dhaqaale maadaama masiibada ay sii xumeyneyso dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi.
Intii lagu guda jiray safarka goobta loo dalxiis tago ee 'Diamond Mountain', Premier Kim Tok Hun "wuxuu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la dhiso aagga dalxiiska habkeenna u gaarka ah ee astaamaha qaranka iyo casriga la isugu geeyo iyadoo si wanaagsan loola jaan qaadayo muuqaalka dabiiciga ah," ayaa lagu yiri wakaaladda wararka ee Kuuriyada Dhexe.
Kim wuxuu sheegay in Kuuriyada Woqooyi ujeedkeedu yahay in aagga buuraleyda laga dhigo "kan caanka ku ah u adeegidda dadka iyo xarun dhaqan oo adduunka oo dhan ka maseerto." Isaga iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka wada hadlay qaabeynta iyo dhismaha "hudheel heer caalami ah, goob golf lagu ciyaaro, goob lagu boodboodo," sida ay qortay KCNA.
Kuuriyada Woqooyi waxay ka wada shaqeynayeen barnaamij wada jir ah buurta buurta iyada iyo Kuuriyada Koonfureed muddo 10 sano ah ka hor intaan la xannibin ka dib toogashadii lagu dilay dalxiise u dhashay Kuuriyada Koonfureed halkaas oo lagu dilay 2008. Qiyaastii 2 milyan oo dalxiisayaal Kuuriyada Koonfureed ah ayaa booqday goobta loo dalxiis tago, oo ah meel dhif iyo naadir ah lacagta qalaad ee Waqooyiga saboolka ah.
Markii xiriirku wanaagsanaaday sannadihii la soo dhaafay, labada Kuuriya waxay riixeen inay dib u bilaabaan howlihii dhaqaalaha ee wadajirka ahaa ee hakadka galay oo ay ku jiraan safaradii buurta dheemman Laakiin Seoul aakhirkii way awoodi kari wayday inay sameyso iyada oo aan ka hor imaanin ciqaabta cunaqabateynta Qaramada Midoobay ee lagu soo rogay barnaamijka nukliyeerka Waqooyiga.
Dabayaaqadii sanadkii hore, Kuuriyada Waqooyi oo careysan ayaa riixday in la burburiyo hoteellada laga sameeyo Kuuriyada Koofureed iyo xarumo kale oo ku yaal goobta loo dalxiis tago waxayna ka codsatay Kuuriyada Koofureed in ay shaqaale u dirto goobta si ay u nadiifiyaan dhismooyinka. Hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Kim Jong Un ayaa ku tilmaamay xarumaha Kuuriyada Koonfureed inay yihiin kuwo "waji gabax" ah oo "muuqaal xun".
Laakiin bishii Janaayo, Kuuriyada Woqooyi waxay dib u dhigtay qorshayaasha duminta iyada oo ka walaacsan faafitaanka coronavirus ..
Leif-Eric Easley, oo ah borofisar ka tirsan jaamacadda Ewha ee Seoul, ayaa sheegay in waqtiga hadalka Axadda ee Kuuriyada Woqooyi ay ka yar tahay arrimaha dalxiiska iyo in badan oo ku saabsan cadaadiska siyaasadeed. "Haysashada rajada Seoul ee ku lug lahaanshaha qatarta," Kuuriyada Woqooyi waxay ku cadaadineysaa Kuuriyada Koonfureed "inay raadiso qaabab ay dib ugu soo celiso faa'iidooyinka dhaqaale ee Waqooyiga," ayuu yiri.